Lisitry ny tranokala, lisitry ny raharaham-barotra, lisitry ny lisitry ny tranokala maimaim-poana
Ity dia lisitry ny lahatahiry orinasa, ahafahanao mandefa ny tranokalanao hanoratra azy ao ambanin'ny sokajy na sokajy zana-tsokajy. Ity dia lisitry ny lisitry ny lisitry ny tranokala maimaim-poana izay mamela anao handefa ny tranokalanao miaraka amin'ny sary, sary famantarana, fampahalalana, sarany RSS, sns.
Ny lisitra dia ahitana ny karazan'orinasa rehetra tadiavin'ny olona ary iray amin'ireo fomba mora sy mahomby hahazoana pototra mpanjifa amin'ny orinasanao.
Sokajy & sokajy zana-tsokajy
ny amin ' C D
aho J K
Lamaody - Fanomezana
Tsy misy - Tombom-barotra
Ny lahatahiry Website Website dia miresaka mivantana momba ny orinasa mifandraika amin'ny fanomezana serivisy sy fivarotana vokatra. Anisan'izany ny serivisy fanamboarana solosaina, serivisy famolavolana tranokala, serivisy SEO, serivisy fiara, fahaiza-manao amin'ny kaody fiteny, mpamatsy serivisy SEM, sns.
Ny lisitra dia ahitana ny orinasa malaza azonao tadiavina amin'ny alàlan'ny fanasokajiana azy ireo miorina amin'ny faritra misy anao mba hahitana ny tena matihanina. .
Ity dia ampahany lehibe amin'ny doka sy fampiroboroboana ny tranonkalanao. Amin'ny maha iray amin'ireo motera fikarohana lehibe azy, Google dia heverina ho motera fikarohana tsara indrindra manolotra ny valin'ny fikarohana mahaliana indrindra ho an'ireo mpitsidika. Ankoatry ny fanarahana ny algorithm sarotra be hamaritana ny laharan'ny tranokala iray, Google dia manolotra ireo tompona tranokala hanao fanentanana doka Google ihany koa. Ity dia fomba iray amin'ny dokambarotra an-tserasera ary antsoina hoe dokam-barotra karama.
Miaraka amin'ny lisitry ny orinasanay, afaka mahazo consultant ianao afaka manampy anao amin'ny doka amin'ny doka Google, maka teny lakile mety ary hampiroborobo ny tranonkalanao amin'ny fomba mahomby indrindra.
Ny BING dia iray amin'ireo motera fikarohana lehibe, izay ampandehanan'i Microsoft. Iray amin'ireo motera fikarohana malaza indrindra izy io ary tranokala tsy mitsahatra manao ezaka ny laharana ambony amin'ity motera fikarohana ity ihany koa.
Ankehitriny, satria fantatsika fa ny motera fikarohana rehetra dia manaraka politikam-pitsipika manokana na algorithm hanomezana toerana misy ny laharana amin'ny tranokala rehetra, zava-dehibe ny fanatanterahan'ny tranonkalanao azy rehetra. Manana matihanina na orinasa voatanisa ao amin'ny lahatahiry izahay izay afaka manampy anao hanatsara ny tranonkalanao ary hampifanaraka izany amin'ny motera fikarohana ary hampakatra ny laharanao ambony.
Wikipedia dia rakipahalalana an-tserasera maimaim-poana izay manome anao fanazavana momba ny zava-drehetra. Wikipedia dia mamorona pejy mitokana ho an'ny zavatra rehetra azonao tadiavina. Ny fampahalalana ao amin'ny pejin'ny Wikipedia dia namboarin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo manerana an'izao tontolo izao.
Ity lisitra lahatahiry ity dia tsy fampitaovana handefasana ny tranokalanao ho sokajy sy sokajy mba hahafahanao mahazo mpanjifa mety ho an'ny orinasanao, fa afaka mahita lisitry ny orinasa sy ny matihanina izay afaka manampy anao hahomby koa.
Alefaso ny lisitry ny tranokala mankany amin'ny Directory
Alefaso ny lisitry ny tranokala amin'ny sokajy irina sy sokajy misy sary, fampahalalana ...